Ikhamera yokugada ku-Shabbat - Rabbi Michael Avraham
Ikhamera egadayo ngoMgqibelo
Izimpendulo > Isigaba: I-Halacha > Ikhamera egadayo ngoMgqibelo
Iphayini Ubuzwe eminyakeni engu-6 edlule
Ucabanga ukuthi kwenqatshelwe ukudlula phambi kwekhamera elandela izimoto ngoMgqibelo, noma phambi kwethoshi elikhanyiswa yizimoto, ucabange ukuthi anginandaba nokukhanyisa ithoshi noma ukuvula ikhamera.
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-6 edlule
Ngokwazi kwami ​​akukho ukuvinjelwa kulokhu. Futhi abaningi sebevele basebenzelana nayo (ngokwesibonelo ku-Shevet Halevi responsa nokunye). Bona isibonelo lapha:
I-Oriya Uphendule eminyakeni engu-6 edlule
Umbuzo emongweni ofanayo ..
Kuthiwani ngokudlula umtshina wevolumu wesistimu ye-alamu lapho isistimu ivaliwe?
Isistimu icishiwe = umtshina uyasebenza nezixwayiso kodwa uhlelo ngeke likhale i-alamu njengoba lukwimodi yokulinda. Umtshina awunawaya futhi ungadlulisela kuphela ngaphandle kokufaka okungenzeka, ngakho awukwazi ukucishwa ngohlelo kodwa ngokukhipha ibhethri kuphela.
Michi Abasebenzi	Uphendule eminyakeni engu-6 edlule
Uyini umehluko? okufanayo nangenhla.
I-Oriya Uphendule eminyakeni engu-5 edlule
Vele ucije umbuzo.
Lokhu kusho ukuthi umtshina uyasebenza futhi uwudlulise njalo uma uwudlulisa, kodwa isistimu ye-alamu ayiphenduli kumthumeli.
Kungumtshina ofakwe endlini yami futhi ngiyakwazi ngokomthetho ngaphambi kokuba njalo ngoMgqibelo ngivale imitshina / ngikhiphe ibhethri.
Umehluko kuphela ukuthi nginenketho yokuxazulula inkinga. Umbuzo uwukuthi ingabe lokhu kuhlupheka kuyadingeka.
Michi Abasebenzi	Uphendule eminyakeni engu-5 edlule
Uma umtshina uvuka kodwa ungadlulisi lutho angisiboni isizathu sokukhathazeka. Ngokubona kwami ​​akukho ukuvinjelwa kulokhu. URabi uRabinowitz uvuselele ukuthi uma ungaboni imiphumela eqondile yesenzo akunqatshelwe (ngekhadi elivula umnyango wehhotela ngeShabbat), futhi yilapho kuba khona imiphumela (umnyango uvuleka) kodwa ungaboni imiphumela yokudlulisa. ikhadi. Lena into entsha engingaqiniseki ukuthi ngiyavumelana nayo. Kodwa lapha ayikho imiphumela nhlobo (futhi hhayi nje ukungayiboni) ngakho-ke angisiboni isidingo sokubhebhetheka.
Moshe Uphendule eminyakeni engu-5 edlule
Ngicabanga ukuthi kufanele uvule umtshina kuphela ngezinsuku lapho ungekho ekhaya. Ngokusobala akunjalo?
mikyab Vuliwe Ingabe iLehavah iyinhlangano ecwasa ngokwebala? (Ikholomu 484)